Borosy fanesorana volo saka
1.Ny borosy fanesorana volo saka ity dia manala ny volo maty malalaka sy volo mandro ny biby fiompy mitazona tsara ny biby fiompinao.
2.Ny borosy fanesorana volo saka dia vita amin'ny fingotra malefaka miaraka amina famolavolana kely, amin'ny alàlan'ny fitsipika electrostatic hisitrihana volo.
3.I io dia azo ampiasaina hanorana ny biby fiompinao sy ny biby fiompinao dia hanomboka hiala sasatra eo ambanin'ny fihetsik'ilay borosy fanesorana volo saka.
4.Ny borosy dia mety amin'ny alika sy saka rehetra. Izy io dia famatsiana biby mora ampiasaina ary mora ampiasaina, mitazona ny efitranonao hadio sy ho salama biby.
Borosy fanorana alika
Ny Dog Brush Massage Brush dia misy paingotra fingotra malefaka, afaka manintona avy hatrany ny volony amin'ny palitao ny biby fiompy raha omena otra na mandro ny biby fiompinao. Izy io dia miasa tsara amin'ny alika sy saka misy habe sy karazana volo rehetra!
Ny toro-hevitra momba ny fifehezana vita amin'ny kofehy vita amin'ny alikaola dia eo anilan'ny borosy fanasana alika mandro dia manome fifehezana lehibe anao na dia mando aza ilay borosy.
Aorian'ny fikosehana ny biby fiompinao dia alao fotsiny amin'ny rano ity alika fandroana alika ity. Avy eo dia vonona amin'ny fampiasana manaraka izy io.